Testosterone Propionate ntụ ntụ (57-85-2) hplc ma98% | Ọrịa na-akwọ ụgbọala
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Testosterone ntụ ntụ / Testosterone Propionate ntụ ntụ
SKU: 57-85-2. Categories: Testosterone ntụ ntụ, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Testosterone Propionate ntụ ntụ (57-85-2), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Testosterone Propionate ntụ ntụ video
Raw testosterone propionate powder bụ isi Characters
aha: testosterone propionate ntụ ntụ
Ọbara arọ: 344.4877
Raw testosterone propionate powder use in steroid cycles
ihe na-eme ka ọ bụrụ ntụpọ
A na-akpọkwa Tesso Proto propionate powder (CAS 57-85-2) aha aha "Testosterone" na "Virormone", site n'ule P, Testo P, propionate.
testosterone propionate ntụ ntụ bụ nke kachasị na-ahụ maka testosterone steroid. Ọ bụ ihe ngwọta na-eji nwayọọ nwayọọ na-eme ka a hapụ ntọala karịa Testosterone nke na-adịghị achọpụta ya, kama ọ bụ ngwa ngwa ka a tọhapụrụ ya karịa ndị fọdụrụ na testosterones. Ọ nwere ụfọdụ uru na ọghọm dị na ester. Ihe kachasị njọ bụ na ndị ọrụ ga-etinye testosterone propionate ntụ ntụ dịka ọkara ụbọchị ọ bụla n'ime oge okirikiri iji nweta nsonaazụ kwesịrị ekwesị. Otú ọ dị, uru ndị dị na ya dị mfe nchịkwa na igbochi mmetụta ndị nwere mmetụta. Nakwa n'ihi na ọ dị ntakịrị ester site na vial, e nwere ọtụtụ n'ezie testosterone kwa ọgwụ, nke na-arụpụta mma na utịp. The estine propionate na-agbasawanye ọkara ndụ nke Testosterone gbasara 4 na ọkara ụbọchị.
testosterone propionate ntụ ntụ Usage
a ga-ejikarị 25-30mg mee ihe site na njirimara ihe ma nye 2-3times kwa izu. Maka mmezi mmezi ndị na-eme egwuregwu, ga-eji 100mg kwa ụbọchị. Nke a bụ ọgwụ dị oke nchedo, ọ dị mfe ịchịkwa, ọtụtụ ndị okenye ga-anabatakwa ya nke ọma.
Ebe ị ga-etinye testosterone propionate ntụ ntụ (CAS 57-85-2)
Enwere ike ịbanye ya n'ime akwara ọ bụla (ọ bụrụ na ahụ ike buru ibu). Ihe kachasị ewu ewu bụ akara, ubu ma ọ bụ ọbụna triceps.
testosterone propionate ntụ ntụ bụ naanị Testosterone na Propionate ester agbatị ya chemical usoro. 'Propionate' bụ Propionic acid, mana otu oge ka Testosterone na-aga, a maara ya dị ka njikọ nke ester (ma ọ bụ ester linkage). A na-ejikọ acid acid dị na 17-beta hydroxyl na ntọala Testosterone. Ndị na-arịa ọrịa ọgwụ anabolic dị elu na-abawanye uru, ma hapụ nwayọọ nwayọọ site na saịtị ịgbawa ahụ. Isi ihe kpatara ọkara ndụ na ntọhapụ bụ n'ihi na mgbe testosterone propionate ntụ ntụ na-abanye n'ọbara, enzymes na-arụ ọrụ iji mebie njikọ dị n'etiti ester na testosterone, nke na-ewe oge dịgasị iche - dabere na ejiri ester mee ihe. N'ikpeazụ, enzymes na-ewepụ ester, ihe fọdụrụ bụ dị ọcha Testosterone bụ nke nweere onwe ya ịrụ ọrụ ya n'ime ahụ. Na Testosterone naanị na ọ nweghị ester na ya nwere ọkara ndụ nke ihe dịka 2 ruo 4 awa. Mgbe a na-ejikọta ester Propionate na ya, ọkara ndụ nke Testosterone na-agbatị n'ihe gbasara 4 na ọkara ụbọchị.
Testosterone na-akwalite njide nitrogen n'ime ahụ ike - ka ụbụrụ ahụ na-eme ka protein dịkwuo ka ọ nwere ike ịchekwa, na nnukwu ya. Testosterone na-emekwa ka ọkwa IGF-1 dị n'ahụ ahụ. IGF-1 bụ ọrụ kachasị mkpa bụ ịhazi njolite na metabolism. IGF-M na-adabere na hormone nke na-eto eto iji mezuo ọganihu na-akwado ọrụ.
Ịdọ aka ná ntị na Testo p ntụ ntụ
Ọtụtụ ndị ikom ga-enwe ike iji 200mg kwa ụbọchị ndị ọzọ dị mfe. Mana aghaghi iburu n'obi na ihe ka elu nke dose ahụ ka ọ ga-abụ na ọ ga-enwe ike inwe ihe ọjọọ. Nkụzi dị elu ga-achọ ịkpachara anya na mgbalị iji chịkwaa mmetụta ndị dị na ya ma ọ bụ ihe karịrị omume iji chịkwaa ha.
Testo p ntụ ntụziaka ndị ọzọ
testosterone propionate ntụ ntụ dị n'ọtụtụ ebe na ahịa ojii, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-ebu steroid zuru ezu na-ebu ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta testosterone propionate powder (CAS 57-85-2) online, ị ga-ahụ nke a dị mfe. Mgbe ị na-ekpebi ịzụta testosterone propionate ntụ ntụ online, ọ dị mkpa iji nyochaa onye na-azụ gị na ika n'ihu ịzụta.
Mmetụta nke ụrọ testosterone propionate (na-achọsi ike)
E nwere ihe abụọ na-achọsi ike na mmetụta nke Testosterone:
mmezi mmelite nke ime / ime egwuregwu (ntachi obi, ume, imeghari ngwa ngwa)
nkwalite ahụike (nrụpụta akwara, abụba abụba)
Ihe ndị ọzọ na - achọsi ike nke testosterone nwere ike ịnata n'oge steroid, gụnyere:
mmụba na nkwonkwo ngwakọta na ọkpụkpụ anụ. Collagen bụ ihe owuwu ihe owuwu maka ihe jikọrọ anụ ahụ jikọrọ anụ ahụ (njikọta, tendon, cartilage, nkwonkwo, na ọkpụkpụ).
eme ka ùgwù onwe onye dị elu
olu miri emi
ọchịchịrị na ntutu nke ntutu isi
abawanye na ọkwa nke IGF-1 na hormone MGF (nke na-akwalite uto uru)
ọtụtụ hemoglobin (ọbara ọbara ọbara)
mmebi-catabolic utịp na anụ ahụ ike site na-eme dị ka anti-glucocorticoid
Post ọgwụgwọ Testosterone
Mgbe ngwụcha nke usoro ọ bụla gasịrị, usoro nlekọta usoro ọgwụgwọ (PCT) zuru oke, ọ dị mkpa mgbe nile, ebe Testosterone-na-akpali akpali njikọta dịka Nolvadex na / ma ọ bụ HCG iji kwado normalization nke HPTA na endogenous Testosterone mmepụta ngwa ngwa o kwere omume. Usoro protocols na mmemme PCT na-emekarị maka oge nke 4 ruo izu 6 mgbe ndị na-arịa ọrịa na-anabolic na-ekpochapụ si na ahụ mgbe njedebe nke oge ahụ. Enweghị ike itinye aka na mmemme PCT kwesịrị ekwesị nwere ike imebi HPTA, nke na onye ọ bụla na-emepụta ọkwa na-ezughị ezu nke Testosterone (ọnọdụ ahụike dị ka hypogonadism), na ọgwụgwọ dịka TRT (Testosterone Replacement Therapy) maka a ga-achọ ndụ.
testosterone propionate Powder (CAS 57-85-2)
testosterone propionate ntụ ntụ- 4-ANDROSTEN-17b-OL-3-ONE 17-PROPIONATE
agbaze agba = 247-252 F / 118-120 ℃
arọ molecule = 344.50
testosterone propionate ntụ ntụ Marketing
Ụzọ ịzụta testosterone propionate ntụ ntụ (CAS 57-85-2) sitere na AASraw
AASraw na-enye 99% Testosterone dị ọcha ntụ ntụ ntụba n'ahụ ndị na-arụ ọrụ ozu ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ịme ihe.
Raw testosterone propionate ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
10g ntụ ntụ
gosiri 4.33 si 5
gosiri 2.00 si 5